VPN tsara indrindra ho an'ny Disney Plus (2020) - Jereo na aiza na aiza mora - Fialam-Boly
VPN tsara indrindra ho an'ny Disney Plus (2020) - Jereo na aiza na aiza mora
Ianao ve mitady Disney Plus VPN? Misy safidy tsy tambo isaina ao amin'ny Internet. Hahita zavatra maimaim-poana ianao, ny hafa kosa premium. Mazava ho azy, tsy hevitra tsara velively ny mampiasa serivisy VPN maimaim-poana, fa ahoana raha mendrika izany? Ny tena zava-dehibe dia ahoana raha manapa-kevitra ny hahazo premium VPN ho an'ny Disney plus ianao nefa tsy fantatrao izay ho fidinao?
Aza matahotra ve ianao! Ity lisitra ity dia manana ny ambony VPN ho an'ny Disney Plus izay hitondra fialamboly tsy misy farany ho anao. Noho izany, andao hanomboka!
Fa maninona no mila VPN ho an'ny Disney Plus?
Ny fampiharana Disney + andrasana indrindra dia eto, ary mahazo laza malaza be izy io. Tsy mila miandry ny fantsona Disney mahazatra ianao raha hijery ny atiny tianao indrindra avy any Disney. Miaraka amin'ny fanampian'ny Disney Plus, azonao atao izany mijery ny zava-drehetra Disney tompony amin'ny fampiharana. Ny tena zava-dehibe dia misy ny fifanentanana iraisan'ny rehetra ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny fitaovana!
Na izany aza, mety tsy manana fidirana mankany Disney any amin'ny faritra misy anao ianao. Na dia manitatra tsy tapaka manerana an'izao tontolo izao aza i Disney, dia misy firenena sasany tsy mamela azy io. Any amin'ny toerana hafa, miatrika fanamby sasany i Disney hahazoana fahazoan-dàlana. Ny tena zava-dehibe dia voafetra ny atiny sasany any amin'ny faritra sasany.
Izany no antony ilanao mpanome tolotra VPN mahay handefasana ny atiny Disney Plus tianao indrindra nefa tsy misy fetra.
Fa maninona no tsy azonao idirana ny Disney Plus?
Afaka miditra amin'ny atiny Disney Plus ianao raha mahazo famandrihana. Na izany aza, raha tsy mahita Disney + amin'ny magazay kilalao voatondro ianao dia mety tsy hisy izany any amin'ny firenenao, izany dia vokatry ny fanakanana Geo ampiasain'ny Disney.
Raha misy any amin'ny firenenao izy io, saingy misy ny atiny tsy hita ao amin'ilay fampiharana, dia azo inoana fa fetra Geo-restrica izany. Ity misy topy topimaso fohy momba ny dikan'ny tsirairay amin'izy ireo:
AVG VPN Review (2020) - Tena mila an'ity ve ianao?
Ny fanakanana ny geo dia rehefa voasakana ao amin'ny faritra misy anao ny atiny, fampiharana, sehatra na mpizara, amin'ny ankapobeny izay misy ifandraisany amin'ny Internet. Izy io dia mety vitan'ny Governemantao, toy ny fahita any Shina na avy amin'ireo mpamatsy.
Raha manao izany ny mpanome tolotra, dia ny antony dia mety hoe manandrana manome ny fampiharana izy ireo. Na izany aza, tsy manana ny alalana rehetra izy ireo.
Ny fameperana geo dia endrika kely kokoa amin'ny fanakanana ny Geo. Amin'ity dia mety tsy manana fidirana amin'ny atiny amin'ny fampiharana Disney plus azonao alaina any amin'ny firenen-kafa ianao. Mety ho noho ny fitsipika sasany. Ny atiny sasany dia tsy mifanaraka amin'ny tabilaon'ny Network na Censor an'ny Firenena. Ny hafa mety hanafintohina mahitsy na tsy mahafinaritra.
Amin'ireto scenario ireto, voafetra ny atiny. Ny fameperana taona koa dia endrika iray hafa. Raha tsy ampy taona ianao araka ny fitsipiky ny firenenao dia tsy afaka mijery ny atiny ianao.
VPN tsara indrindra ho an'ny Disney Plus:
Miaraka amin'ireo lafin-javatra ireo ao an-tsaina, VPN mamela anao hamaky ny sakana toy izany ary handefa ny atiny. Ny VPN dia hifandray amin'ny lohamilina misy any amin'ny firenena hafa hahafahanao mijery sy mandefa ny atiny tianao tsy misy olana. Noho izany, ity ny lisitr'ireo VPN fito tena mahay indrindra ho an'i Disney Plus sy ny hafa fampiharana mivantana :
Manomboka eo amin'ny lisitra, manana Nord VPN izay mitombo isa hatrany izahay. Izy io dia mitondra anao fifandraisana haingam-pandeha miaraka amin'ny fisian'ny firenena 60 mahery sy mpizara 5.000 mahery. Azonao atao ny mampiasa azy io saika amin'ny fitaovana rehetra! Raha misafidy ny famandrihana premium an'ny Nord ianao dia azonao ampiasaina amin'ny fitaovana enina misaraka. Noho izany, sandam-bola be io.
Miaraka amin'ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha, mahazo endri-javatra maro ianao, fiarovana VPN toy ny encryption sy encryptions, ary maro hafa. Mety ho lafo ihany izany ho an'ny olona tokan-tena, fa raha mahazo olona enina hiditra ianao dia manana VPN mora vidy tokoa. Tsy isalasalana fa VPN kilasy eran'izao tontolo izao ho an'ny Disney plus.
NordVPN Zoma Mainty - OFF 83% (Fifanarahana mahatalanjona)
Raha tsy misy ny Nord any amin'ny firenenao dia azonao atao ny misafidy Express VPN noho ny fahafahany mahatalanjona any amin'ny firenena 160 mahery. Izy io dia manana mpizara mihoatra ny 3.000, izay antsasaky ny Nord, fa ny tsirairay kosa dia mahavita be. Raha te handefa Disney amin'ny fitaovana rehetra ianao dia azonao atao ny misoratra anarana amin'ny Express ary mankafy hatramin'ny fitaovana 5 ho an'ny VPN.
Ny ampahany tsara indrindra amin'ny VPN dia ny asany amin'ny fomba tsara indrindra amin'ny fitaovana sy lampihazo rehetra, ao anatin'izany ny console lalao. Misy fanitarana ho an'ny mpizaha ary inona koa. Raha tena te hiditra amin'ny atiny Disney Plus ianao, VPN tsara izany. Manana fiasa mandroso maro izy io, toy ny switch switch sy ny tunneling split. Ergo, manamafy ny fiarovana ny Internet anao ianao. Ankoatra ny fialamboly tsy manam-petra, mahazo fiarovana matanjaka ianao! Sariaka be mpampiasa izy io ary mirehareha amin'ny fiarovana ambaratonga miaramila.
ExpressVPN Zoma Mainty - Fifanarahana mahatalanjona
Ity misy VPN mahazatra mahazatra izay misy any amin'ny firenena 60 mahery ary manitatra hatrany. Mahazo mpizara 1,700 na mihoatra ianao. Mitovy amin'ny VPN hafa, manana mifanentana amin'ny rehetra ianao. Na izany aza, ny mampiavaka an'i SurfShark dia ny fahafahanao mampiasa azy amin'ny fitaovana maro araka izay itiavanao azy amin'ny famandrihana tokana.
Izy io dia VPN ambaratonga miaramila izay mitondra anao fahaizana avo lenta ho an'ny fanaingoana miaraka amin'ny lisitra Fotsy. Amin'ny teny tsotra dia azonao atao ny manapa-kevitra hoe fampiharana inona no afaka mampiasa VPN. Afaka mankafy tolotra maro ianao amin'ny SurfShark izay tsy ho hitanao amin'ny VPN hafa. Na izany aza, mety hahita fetra vitsivitsy amin'ny famoahana ny fahafahan'ny fampiharana hafa ianao. Hiasa tsara ho an'ny Disney Plus.
VPN iray hafa mahazatra mahazatra azonao ampiasaina amin'ny fitaovana rehetra. Mahazo miditra amin'ireo mpizara maromaro mendrika ianao (1,500+) miaraka amin'ny fananana any amin'ny firenena mety rehetra. Ny tena zava-dehibe dia azonao atao ny mampiasa famandrihana tokana amin'ny fitaovana maro araka izay itiavanao azy.
Ampio izany amin'ny backup backup, ary manana fifanarahana mahasarika ianao. Raha tsy te-hisoratra anarana avy hatrany ianao, dia azonao atao ny manandrana andrana 30 andro, izay mahatonga azy io ho VPN tsara ampiasaina Raha tsy azonao antoka raha safidy VPN no mety, ny fitsarana dia hanampy anao hanao fanapahan-kevitra tsara kokoa. Amin'ny teny tsotra, raha mila mpamatsy VPN miasa tsara ianao ary manana fampisehoana mahazatra dia ity no an'ny Disney Plus anao.
Ity misy fanampim-panazavana efa nahay tsara tamin'ny lisitra. CyberGhost dia manana mpizara mihoatra ny Nord na ExpressVPN, miaraka amin'ny 6.400 mahery ao amin'ilay lisitra. Azo alaina amin'ny firenena 90 eo ho eo koa izy io, ary ny famandrihana tokana dia azo ampiasaina hatramin'ny fitaovana fito.
Misongadina izy noho ny fanohanany mafy ny Wi-Fi ho an'ny daholobe. Noho izany, raha mandehandeha be ianao na te hiditra amin'ny atiny Disney plus avy amin'ny toerana lavitra, ity dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra. Tena azo antoka ho an'ny Wi-Fi anao. Na dia tsy manana mifanentana toy ny VPN hafa aza izy io, dia manohana ireo safidin'ny rehetra nalaza. Ny tena zava-dehibe dia matetika ny orinasa dia namoaka tolotra sy fihenam-bidy isan-karazany izay afaka ankafizinao.
5. VPN mahery
Raha tsy azonao jerena ilay izy fa misy any amin'ny firenena 30 eo ho eo ary ambany ny isan'ny mpizara azy, manodidina ny 950 dia manolotra be eo ambony latabatra ny Strong VPN. Ho an'ny famandrihana tokana dia azonao ampiasaina amin'ny fitaovana 12, ka mora kokoa aminao ny mizara ny vidiny.
Ny lafiny manaitra indrindra dia ny fampifanarahana ny rahona izay mitahiry tahiry 250 GB be dia be ao aminao. Azonao atao ny mampiasa azy io hampidinana na hitahirizana ny atiny manerantany tsy misy olana. Ny teboka ivarotana iray hafa dia ny fiaraha-miasa WireGuard.
Miaraka amin'ny fisoratana anarana VPN matanjaka, azonao atao ny miditra amin'ny fampiharana sy fitaovana maro izay natolotr'i WireGuard. Ahitana fanamafisana maro, anti-virus, anti-malware, enhancer fampiroboroboana, ary fitehirizana. Vaovao ny VPN ary manitatra ankehitriny. Miaraka amin'ny zavatra atolotray azy, dia misy vidiny tsara amin'izany.
6. fidirana amin'ny Internet tsy miankina
Angamba tsy mila tsy fahampiana firenena ianao ary mila mpizara be indrindra? Avy eo manana fidirana amin'ny Internet tsy miankina ianao. Ity VPN ity dia fitaovana mahomby tokoa izay anananao manana server betsaka indrindra. Mpizara 12000 mahery dia midika fa tsy hanana olana amin'ny streaming sy mitady ny atiny Disney Plus tianao indrindra ianao.
Tsy izay ihany! Azonao atao ny mampifandray azy amin'ny fitaovana 10 hatramin'ny famandrihana tokana. Izy io dia mora ampiasaina amin'ny interface-friendly. Tsy dia be loatra ny endri-javatra, fa raha mila VPN mahavita ny asa amin'ny Disney + streaming ianao dia io no izy.
Ny vidin'ny fisoratana anarana iray dia tena mifaninana, ary mahazo Gateways VPN marobe ianao. Araka izany, tsy fantatra tanteraka ny firaketanao, ary tsy misy hazo. Na izany aza, tsy manome fiarovana sy serivisy hafa VPN maro no miara-miasa. Na inona na inona, safidy mahafinaritra io.
1Q. Inona ny zava-dehibe indrindra amin'ny VPN?
taona:Ny VPN dia tokony ho mora ampiasaina ary mifanaraka amin'ny fitaovana kasainao hampiasaina amin'ny Disney Plus. Raha manome fiarovana fanampiny toy ny anti-malware, ny encryption na ny fitehirizana dia miampy be izany. Na izany aza, ny fisian'ny mpizara no tena manakiana sy ny firenena.
2Q. Inona ny serivera tsara indrindra hifandraisana amin'ny Disney Plus?
taona:Izay mpizara rehetra avy any Etazonia no mpizara tsara indrindra ho an'ny Disney Plus VPN. Hahatonga anao hiditra amin'ny atiny feno tsy misy ferana io. Amin'izay dia ho afaka mankafy ny Disney + anao amin'ny atiny ianao.
3Q. Fa maninona aho no tokony hahazo Premium VPN Ho an'i Disney?
taona:VPN maimaim-poana marobe no mandondona na mivarotra ny angona fahatelo ataonao amin'ny mpivarotra hafa amin'ny dokam-barotra. Ny sasany mety manana fetran'ny Bandwidth manokana ary hampihena ny fifandraisanao. Raha tsorina, dia mety ho ampy hampiala anao, fa tsy zavatra tadiavinao amin'ny streaming Disney Plus.
Ankoatra ireo loza mety hitranga dia mety hampandefitra ny antsipirihanao ianao. Na izany aza, ny VPN premium dia tsy mitazona ny vatan'ny fampiasanao. Mitazona anarana tsy fantatra anarana tanteraka ianao rehefa miditra amin'ny Internet. Ny tena zava-dehibe dia tsy mitongilana ny hafainganam-pandehanao ary mahazo fiarovana fanampiny amin'ny Internet ianao.
4Q. Ara-dalàna ve ny fampiasana VPN amin'ny streaming Disney +?
taona:Eny, mbola tsy nisy lalàna mifehy ny fampiasana VPN. Afaka mampiasa VPN ara-dalàna ianao hidirana amin'ny atiny. Mitovy amin'ny fitsangatsanganana any amin'ny kaontinanta hafa izany sy ny fidirana amin'ny rindranasa tianao ary inona koa. Mpizaha tranonkala maro no tonga miaraka amin'ny VPN, ary saika ny orinasa rehetra, anisan'izany ireo goavambe teknolojia, no niasa tamin'ny famolavolana ny serivisy VPN.
Ny tsirairay amin'izy ireo dia manolotra fampisehoana mahatalanjona. VPN maro no handà ny hafainganam-pandehanao rehefa mifandray amin'ny mpizara hafa ianao. Na izany aza, ireo VPN ireo dia hitazona ny hafainganam-pandehanao amin'ny fisintomana sy ny fampidinana tsy tapaka. Araka izany, azonao atao mankafy HD streaming ary betsaka kokoa ho an'ny Disney Plus anao.
Aza avela hanakana anao tsy hankafy ny atiny mendrika anao ny sakana amin'ny faritra na kapitalisma. Rehefa dinihina tokoa, mandoa ny famandrihana feno ianao, ary manan-jo hiditra ao. Ankafizo izao ny streaming amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra, indrindra raha mandeha ianao, miaraka amin'ireo VPN tsara indrindra ho an'ny Disney plus.
VPN tsara indrindra ho an'ny FireStick
VPN Zoma Mainty - Fihenam-bidy 90%
10+ Serivisy fandefasana fahitalavitra tsara indrindra amin'ny taona 2020
Ahoana ny fomba hamafana ny cache amin'ny iPhone & iPad - Safari, Apps
mijery andian-dahatsoratra streaming maimaim-poana
afaka mandefa hafatra amin'ny instagram pc ve ianao
ahoana no ahazoako fotoana fampisehoana amin'ny fahitalavitra mahira-tsaina
ohatrinona ny vola vidin'ny roblox